Akuyona imfihlo ukuthi izingane amathoyizi lapho isikhathi eside, nakuba usuku oluqondile ukubukeka lokuqala isihloko olunjalo ungatsheli muntu. Umsebenzi oyinhloko e ithoyizi - ukuzijabulisa, nokho, kubaluleke kakhulu njengoba umsebenzi kwezemfundo noqeqesho, okuyothi ngalo ingane eba ingqondo, ukucabanga, logic, umcabango, babe nobudlelwano. Kunzima ukusho owawungumnyaka ithoyizi wokuqala, kodwa kungenzeka kwaba into rattles noma onodoli.
Umsuka wegama onodoli, njengoba abaningi becabanga, uphansi izimpande zenkolo. abantu lwasekuqaleni ngikudalile okuthiwa namaqhawe noma izithixo, efanekisela samuntu impahla kankulunkulu, idemoni noma umoya. Izithombe bavunyelwa ukuba bathandaze akuyona into abstract, kodwa ukhonkolo. Ezinye izithombe kwakukukhulu futhi osungulwe ezifeni engcwele noma entabeni zemvelo. Okunye-miniature ekhiqizwa, enza umsebenzi nezigqizo nanoma iziphi talismans.
Man ukucabanga: uma ngizokufeza Nkulunkulu (umoya), yena uyokwenza kangcono kimi. Ngenxa yalesi sizathu, izithombe ezincane elala izingane, ikakhulukazi kusukela babengesibo ngokumelene. Kwakukhona amathoyizi izingane laba balobi abakuloba (humanoid) noma zoomorphic (esincelisayo-like) zilwane. Iqiniso lokuthi abantu abahlukene ngezikhathi ezehlukene onkulunkulu abahlukahlukene nje osezingqondweni zethu, njengabantu ngabanye kodwa futhi izilwane hhayi kuphela - okubizwa ngokuthi okhokho totemic.
I umsindo wokuqala wabonakala isikhathi eside futhi nazo ezihambisana nenkolo. Iqiniso lokuthi abapristi Labelaphi ezicini ezihlukahlukene ezisetshenziswa umsindo njengendlela okwesabisa away imimoya emibi. Kuze kube yimanje, benza rattles iningi elula: thatha imifino efana ithanga noma ikhukhamba, uginindela isuswe, omisiwe, iphonswe omisiwe imbewu, amatshe, amatshe, amagobolondo. Abadala ngokushesha baqaphela ukuthi izingane ezincane ezifana nalezi rattles, jabulisa futhi zibaphazamise.
Kufanele kuqashelwe ukuthi amathoyizi yayimane nje ngowokuqala ukuthi abantu yasungulwa. Dolls, isibonelo, kusukela amantombazane isiqalo ukuthanda, ukuthuthukisa isazela sabo kwabakhulelwe. Nokho, rattles kukhona kokubili NAMADLOZI insimbi yomculo, ukuthuthukisa umqondo zezingane isigqi nokuzwa. Kungokufanayo uya for izinsimbi zomculo ezishaywayo - tom-Toms, izigubhu, njll Kuyinto ukwazi ukuthi amaGreki asendulo ayekholelwa: rattles kanye ratchet axoshe imimoya emibi engalimaza izingane.
Idivayisi yokwenza sidilizwa yadalwa kanje: thatha isibambo ukuthi enamathiselwe drive wakhe, futhi kuso - izinsimbi. Okuningi liye eyaziwa okuthiwa SISTROM: ukuthatha induku ezimbili transverse kanye plate ngamunye metal abethela. Ukuze dolls lokuqala, zingabantu, njengoba kushiwo ngenhla, kwenziwe umsebenzi ekuphebezeni noma bangasiza ngandlela-thile. Ngokwesibonelo, onodoli bendabuko Russian zernovushki ekhiqizwa ngesikhathi umkhosi sokuvuna, ukuze kuzalwe kakolweni noma rye.
Amathoyizi izingane zazenziwe ngezinto zemvelo: nge sigodo, zenhlabathi, kamuva metal. Ngaphezu kwalokho, besebenzisa ezahlukene izinhlobo izindwangu, izindophi, Imicu amakhambi omisiwe kanye nezinye izinto ezitholakalayo. Dolls, ababekwa ezandleni nasezinyaweni, eyaziwa njengoba izikhathi waseGibhithe lasendulo ezihambayo: izitho zomzimba bajoyine izindophi eqinile noma izintambo. Ngokusobala, ngenxa yalokhu kwaba khona inhliziyo ngonodoli lokuqala, lapho emaphaphethi emaphaphethi wathutha esebenzisa edonsa omunye izindophi.
Amathiphu zendlela ukuqinisa amasosha omzimba wengane
BMW kagesi: efana uPapa, kangcono kuphela
Inhloko-dolobha ye-South Africa - Pretoria, eBloemfontein Cape Town?